Intle kwaye icocekile 1BR, indawo entle! - I-Airbnb
Intle kwaye icocekile 1BR, indawo entle!
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguBojana
Ifakwe ngokupheleleyo kwi-54 yemitha yesikwere yendlu ekhoyo ukuba irente. Ibekwe kwimizuzu emi-2 umgama wokuhamba ukusuka kwiMall yaseMontenegro kunye nesikhululo sebhasi / sikaloliwe. Ixhotyiswe ngentambo yeTV / ukufikelela kwi-intanethi.
Ibandakanya igumbi lokuhlala elivulekileyo elinesofa esongwayo enokuhlala kakuhle abantu aba-5, ikhitshi kunye negumbi lokutyela, igumbi lokulala elineebhedi ezi-2 ezingatshatanga (ezilungele abahambi), igumbi lokuhlambela kunye ne-terrace ebanzi. Indlu ikumgangatho we-5 kwaye ijonge emazantsi, oku kuthetha ukuba amagumbi atshiswa lilanga imini yonke. Ukuxhotyiswa ngokupheleleyo kunye nezixhobo zokuhlambela (nokuba iwasha!), Izixhobo zasekhitshini kunye nezixhobo ezisisiseko (ityuwa, iswekile, ikofu, iti ...), kunye ne-cable TV, ukufikelela kwi-intanethi, ukufudumeza kunye ne-air-conditioning.
Le ndlu ikumgama nje ongama-200m wokuhamba ukusuka kwindawo yokuthenga yevenkile yaseMontenegro (enentengiso yemveliso entsha kumgangatho wokuqala) kunye nemizuzu embalwa kude nesikhululo sebhasi / sikaloliwe kunye nesikhululo segesi. Ikwakummandla weebhari ezininzi kunye neeresityu kunye nemizuzu eli-10 yokuhamba umgama ukusuka kumbindi wesixeko.
Okona kubaluleke kakhulu, ifikeleleka ngokulula kuzo zonke iindlela ezinkulu kwaye ineendawo zokupaka zasimahla phambi kwesakhiwo.
4.76 out of 5 stars from 354 reviews
4.76 · Izimvo eziyi-354
Umbuki zindwendwe ngu- Bojana